Naya Post Nepal | एकै बाउका १२ बहिनि छोरिहरु सामाजिक संजालमा भयो भाइरल कसरी भए त ? (भिडियो हेर्नुस)
एकै बाउका १२ बहिनि छोरिहरु सामाजिक संजालमा भयो भाइरल कसरी भए त ? (भिडियो हेर्नुस)
बेला बेलामा सामाजिक संजाल विभिन्न कुराहरु भाइरल हुने गर्दछन । धेरैले प्रयोग गर्ने सामाजिक संजालमा कहिले रमाइला कुरा त कहिले पिडादायी कुराहरु चर्चामा आउने गर्दछन । यस्तै अहिले सामाजिक संजाल टिकटकमा एउटा भिडियो भाइरल बन्यो ।
एकै घरका १२ बहिनी छोरिहरुको उक्त भिडियो लगभग १ लाख भन्दा धेरैले हेरिसका छन भने थुप्रैले मनपराएका छर र उतिनै टिप्पणीहरु पनि गरेका छन। नेपाली महिलाहरुको चाड तिजको अवसर पारेर माइतिमा भेला भएका उनिहरुले `हामी एकै बाउ का १२ बहिनी छोरिहरु´ भन्दै
क्रमश एक नम्बर देखि १२ नम्बर सम्म भन्दै देखिएको भिडियो टिकटकमा भाइरल बनेको थियो । त्यसका बारेमा थुप्रैले टिप्प णी गरेका थिए । कतिपयले एउटै परिवारको नभएको पनि टि प्पणी गरेका थिए । तर उनिहरु एकै घरका दिदिबहिनी हुन ।
प्युठानको नौ बहिनी गाउपालिका ७, बास्कोट घर भएका ती परिवारमा १२ बहिनी छोरिहरु मात्र रहेका छन । उनिहरुको दा जुभाइ भने छैनन । ८ जनाको बिबाह भै सकेका उनिहरु सबै प्युठान मै व्यापार गर्दै आएका छन ।
आफ्नो बुवा पनि ब्यापार नै गरेकाले आफुहरु पनि सबै त्यतै लागेको उनिहरु बतांउछन । ८ जना मध्ये कोहि मागी बिबाह गरेका त कोहि आफैले भागेर बिबाह गरेको बताए ।
परिवारमा छोरा नै चाहिन्छ भन्ने मान्यता भएको समाज मा अ हिले आफुहरु छोरा नभए पनि परिवारलाई खुशी राख्न सकिन उदाहरण भएको बताए । घरमा बुबालाइ छोरा नभएको भन्दै पहिले पहिले कतिपयले विभिन्न कुरा
का*ट्ने गरेको सुन्दा न*राम्रो लाग्ने गरेको जेठी छोरिले बताइन । तर अहिले आफुहरुले विवाह नभए का बहिनिहरु र बुवा आ मालाई कुनै कुराको कमि हुन नदिएको जेठी छोरी बताउँछिन ।
विभिन्न चाडपर्व हुदा सबै दिदिबहिनी सँगै भएर रमाइलो गर्ने गरेको भएकोले बाबा आमा भाग्यमानी भएको उनिहरु बता उछन । १२ बहिनी छोरिहरु भएको परिवार भए पनि आफुहरु मिलेर बसेको र कसै प्रती कसैको कुनै मनमु*टाव नभएको उनिहरु बताउँछन ।
अहिलेसम्म आफुले भनेको कुनै बहिनिले पनि कुरा नकाटेकोले पनि यसरी मिलेर बस्न सकेको जेठी छोरिले बताइन । त्यस्तै ब हिनिहरु मात्र नभै ज्वाइहरु पनि उत्तिकै बुझ्ने भएको उनी बता उँछिन ।
२०७९ बैशाख २२, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 12392 Views